Dowlada Mareykanka oo Soo Dhaweysay Ansaxinta Wasiirada Cusub – Radio Muqdisho
Ergeyga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya James P. McAnulty ayaa soo dhaweeyey ansaxinta wasiiradda cusub ee dowladda federalka Soomaaliya.
“Dowladda Mareykanka ayaa waxay dhiri-galineysaa talaabadda ay qadeen dhamaanba qeybaha kala duwan ee suurta galiyey in laga gudbo siyaasadii cakirneed, lana dhiiso xukuumad shaqeyneysa. Waxaan ku boorinayaa dhammaan dhinacayadda kala duwan in ay si wada-jir ah u wada shaqeeyaan si horumar looga sameeyo dhinacyadda siyaasadda iyo amniga lana gaaro himilada 2016, ayuu yiri SRS McAnulty.”
Dowladda Mareykanka waxaa ay garab taagantahay dowladda Soomaaliya, waxeyna la shaqeyn doontaa dhammaan wasiiradda cusub ee la ansixiyey, Raisul Wasaaraha, Madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada gobolada iyo kuwa soo socda si loo horumariyo amniga,dowlad wanaaga iyo weliba horumar dhaqaale oo ay ummadda Soomaaliyeed tanaadaan.
Taliyaha Hay"dda Sirdoonka iyo nabadsugidda Qaranka Soomaaliyeed oo tababar Dhuusa Mareeb ugu soo xiray Ciidamo Hay.ada ka tirsan .